काठमाडौका यी मुख्य स्थलमा खेलौना पसल, दैनिक सयौँ ग्राहक, महिला कति ? – Sapana Sanjal
राजधानी काठमाडौ मुख्य स्थलमा रहेका केही होडिङ बोर्ड र भित्र राखिएका पसलका सामानले के यो प्रश्न नगर्ला ? यो रूढिवादी समाजमा सांस्कृतिक विचलन की क्रान्ति ? हो यही प्रश्नले हामी यसको केही खोजी गर्न लाग्यौँ ।
तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालमा खेलौनामा नेपालीको दिलचस्पी बढ्दै गएको पाइयो । नेपालको राजधानी काठमाडौका प्रमुख बाजार बीचबीचमा रूढिवादी समाजमा सांस्कृतिक क्रान्तिको दृष्य देखिन्छ ।
अझै यो यस्तो समाज जुन तस्विरमा देखिएका चित्र र त्योसँग जोडिएका क्रियाकलापका बारे सार्वजनिक चर्चा अझैपनि हुन सक्दैन ।
घरमा सबै परिवार बसिरहेका बेला परिवार नियोजनका साधनको विज्ञापन आयो भने अझैपनि परिवारका सदस्य रातोपिरो भएर मुख लुकाउँछन् ।
तर यो खेलौनाको ब्यपार भने गज्जब भइरहेको छ । मञ्जीत पौडेल र प्रवीण ढकालको खेलौना पसलमा हामी पुग्दा अनौठो क्रान्ति भइसकेको देखियो । उनीहरुले महिला पुरुषको खेलसँग सम्बन्धित कृत्रिम खेलौना बेचेर नै लाखौ कमाइसकेका छन् ।
केही बर्ष पहिलेदेखि यी पौडेल र ढकाल मिलेर ‘स्वीट सीक्रेट’ नामको एक पसल खोलेका थिए । यो नेपालको वैधानिक पसल हो । जसले शहरमा होडिङ बोर्ड राखेर नै कपडा पसल चलाए जस्तै खुलेर राखेको छ ।
यो पसलबाट निक्कै राम्रो आम्दानी छ । प्रवीण ढकाल बताउँछन् अहिले हरेक महिना तीन देखि चार लाख सम्मको ब्यपार छ । यो पसल खोल्दा सुरुमा हामी निक्कै चिन्तित थियौँ । राज्यबाट अनुमति त लिइयो ।
कतै यसको बिरुद्धमा प्रर्दशन पो हुने हो की । यसलाई बन्द गर्न अनेकौ उल्झन पो आइपर्ने हुन् की भन्ने चिन्ता थियो । तर त्यो चिन्ता मनको चिन्ता मात्र बन्यो हामीलाई केही समस्या आइपरेन । अब त बर्षौ बिताई सकियो । समस्या टर्यो ढकालले भने ।
कम्पनी दर्ताको समयमा केही झमेला खेप्नु परेको थियो । यसको सम्भावना र लाभका बारेमा राज्यका अधिकारीलाई निक्कै बतायौँ ।
ढकालले भने त्यसैले दर्ता गर्दा प्रवन्ध पत्र, नियमावलीमा नै उल्लेख गरेर “विभिन्न प्रकारका कृत्रिम पुरुष र महिला अंगयुक्त खेलौना आयात गर्ने, त्यसलाई नेपाली बजारमा बेच्ने । हुन त दुनियाँका धेरै देशमा यस्ता खेलौना बिक्रि भइरहेका छन् ।
‘स्वीट सीक्रेट’ नामक पसल शहरका मुख्य मुख्य स्थानमा छन् । तर ग्राहक भने सुटुक्क आउँन खोज्छन् । ढकाल बताउछन्, “काठमाडौमा हाम्रो पसलमा मात्र दैनिक १०० भन्दा बढी ग्राहक आउँछन् ।
यसमा १० प्रतिशत महिला ग्रहक नै हुन्छन् । जो ग्राहकलाई पसलमा नै आएर किन्न अप्ठ्यारो लाग्छ उनीहरुलाई अनलाई न सेवा दिइएको छ । ढकाल भन्छन् एक तिहाइ अर्डर त अनलाईन नै आउँछ र होम डेलिभरी नै हुन्छ । यो त एउटा पसलको आँकडा हो । अब यस्ता पसल कयौँ भइसकेका छन् । यसलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक हजारौ संख्यामा खेलौना बिक्रि हुन थालिसके ।
मञ्जीत पौडेल बताउछन् की, “पसलमा आउँने ग्राहक धेरैजसो ३० बर्ष आसपासका हुन्छन् । पुरुषले भ्राइब्रेटर र गुडिया किन्छन् ।
महिलाले अंग खरिद गर्छन् । पौडेलका अनुसार धेरैजसो ग्राहक यस्ता हुन्छन् उनीहरुका जीवनसाथी कोही न कोही देश बाहिर हुन्छन् महिलाले किन्छन् भने पुरुष विदेश गएका हुन्छन् ।
Prevयी हुन् कोरोना सं,क्र,म,णका ५ खतरनाक लक्षण, जुन देखिनासाथ अस्पताल गइहाल्नुपर्छः विज्ञ
Nextसाँझ परेपछि बालुवाटारमा ओलीलाई पुगेको यो सूचना